Foldheeryada casriga ah ee loogu talagalay Mac: waxa ay yihiin iyo waxa loogu talagalay | Waxaan ka socdaa mac
Faylka casriga ah ee Mac: maxay yihiin iyo waxa loogu talagalay
Javier Porcar | | OS X El Capitan, Tababarada
Marar badan ayaan ilaawnaa in nidaamyadeenna hawlgalka ay na siinayaan toobiyeyaal aan la tirin karin si aan innaga u gaarno maalinba maalinta ka dambaysa wax soo saar badan. Markii ay i siiyeen badeecadaydii ugu horreysay ee Apple, iPod Touch, mid ka mid ah shaqooyinka aan sida aadka ah u isticmaalay waxaa ka mid ah abuuritaanka albumyo casri ah, taas oo ah, fayl ay ku jiraan heesahaas oo aan horay ugu sii go'aamiyay xuduudaha la rabay (nooc, koox, haddii «I u jeclaan », iwm). Isla sidaas ayaa lagu samayn karaa shayada aan ku hayno Raadiyaha, waana loo yaqaan Fayl smart.
Taasi waa, iyagu waa fayl meesha cunsurrada aan dooneyno inay soo muuqdaan ka muuqan doonaan.
Laba waji oo hore oo xisaabta lagu darey:
Waa inaan taas xoojinaa walxaha looma guurinin faylkan, haddii kale taas waxaan u arki doonnaa sidii inay marin toos ah u tahay.
Cusboonaysiinta isla markiiba. Haddii shay cusub lagu daro (ama la tirtiro) kooxdeena lana kulmo astaamaha Smart Folder (yada) aan haysano, Faylkeena Smart-ka ah si otomaatig ah ayaa loo cusbooneysiin doonaa.
Tusaale ahaan, hal dariiqo oo aan ku xakameyn karo booskeyga darawalka ayaa ah samee fayl caqli badan oo ay ku jiraan waxyaabo aad u waaweyn oo buuxiya darawalkayga adag. Tan awgeed waxaan:
Fur Raadiyaha iyo liiska faylka, riix: «Fayl Cusub oo Casri ah» ama kumbuyuutarka toobiye N
Tan ayaa la sameeyay tab cusub ayaa lagu abuuray Baadhaha magaca leh Fayl Cusub oo Casri ah, iyo a badhanka lagu daro baarka hoose ka muuqda.
Riix ayaa sheegay in ka badan, oo waxaan arki karnaa astaamaha raadinta ee kala duwan: magaca, taariikhda furitaankii ugu dambeeyay, taariikhda abuuritaanka, iwm. Waxaan soo xulaynaa midka aadka noo xiiseynaya ka dibna waa inaan tilmaamno a qayb-hoosaad: Tusaale ahaan, haddii aan dhahno taariikhda ugu dambeysa ee furitaanka, waa inaan markaas tilmaamnaa maalmihii ugu dambeeyay ee X.
Ha ka baqin, waxaan heysanaa fursado badan, laakiin kuwan waxaa laga helayaa ikhtiyaarka ugu dambeeya «kale» halkaas oo aan ka dooran karno ikhtiyaarka tusaalahayga: Cabbirka iyo qeybta hoose waxay muujinayaan cabir ka weyn 1 GB.
Ugu dambeyntii xusuusnow inaad keydiso Faylka si aan dib loogu bilaabin hawsha markale. Riix badhanka Badbaadinta ka hooseysa tabta. Sidoo kale mar haddii la riixo waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku keydiso galka qeybta hoose si aad si fudud ugu hesho
Fursadaha waxay noqon karaan kuwo aan dhammaad lahayn, wax yar uun baa haray oo isbarasho Folders Smart.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » OS X El Capitan » Faylka casriga ah ee Mac: maxay yihiin iyo waxa loogu talagalay
Wanaagsan, wanaagsan, aad u fiican! waxyaabo badan oo sidan oo kale ah iyo daandaansi yar oo ku saabsan iphone color ka soo baxaya 2019 ..
Twitter wuxuu gaari karaa jiilka afaraad ee TV-yada Apple
macOS Sierra iyo sida noocyada beta ay u shaqeeyaan